Madaxweyne Trump oo ka hadlay Xil ka qaadista lagu sameeyey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Trump oo ka hadlay Xil ka qaadista lagu sameeyey
Madaxweyne Trump ayaa soo saaray khudbad muuqaal ah oo aan looga hadlin dacwadda xilka xayuubinta ee lagu soo oogay, laakiin wuxuu diirada ku saaray codsi uu u jeediyay dadka Maraykanka oo ah inay midoobaan oo ka hortagaan rabshadaha.
“Marnaba cudurdaar looma sameyn karo rabashadaha. Cudurdaar ma laha ama lama aqbali karo. Maraykanka waa dal ay sharciyo ka shaqeeyaan” ayuu yiri Trump.
Kumannaan Ciidamo ah oo isugu jira boolis iyo kuwa ilaalada qaranka ayaa si weyn u ilaalinayay amniga xarutan congress-ka Maraykanka iyo waliba waddooyinka magaalada Washington, kaddib rabshadihii dhacay toddobaadkii hore.
Hay’adda FBI ayaa ka digtay in kooxo taageersan Trump ay qorsheynayaan inay weeraro kale geystaaan iyagoo ka careysan go’aanka ama dacwadda xil ka xayuubinta Trump iyo waliba caleemo-saarka toddobaadka danbe la caleemo saarayo Joe Biden madaxweynaha la doortay. Duqa magaalada Washington ayaa dadka ku booriysay inaysan gabi ahaan iman caleemo-saarka Joe Biden.
Previous articleCiidamada Etoobiya oo hareereyey madaxweynahii Qoomiyada Tigareyda
Next articleMarkii labaad oo fashil ku yimid Jadwalkii Doorashada Aqalka Sare
Somaliland hoggaamiyeyaasha mucaaradka Cabdiraxmaan Cirro iyo Feysal Cali Waraabe oo Codadkooda...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 31, 2021 0
Somaliland waxaa saaka ka bilaabatay codeynta doorashada golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka. Dadweynaha ayaa saaka codkooda ka dhiibanayay xarumaha codbixinta oo gaaraya 2,709. Waxaana kamid ah...
Magaalada Muqdisho oo cudurka Karoonaha Faraban ku haayo iyo dhimashada oo...
Ganacsade Bashiir Gaboobe oo lagu aasay xabaalaha Langata ee magaalada...
Barnaamijka Awoodda 5-aad ee Dalsan iyo Wareysi xiisa badan Wasiir hore,xildhibaan...
Waaxda gaanshaandhiga Maraykanka ee Pentagon oo xaqiijisay in duqaymo ka dhan...
Lamaane Somali ah oo dhigta dhigaal bangi oo ka badan $...
Sheekh Shariif, Xildhibaan Odawaa iyo wasiirka Fiqi oo qoraallo ka...
Ciidamada Dowlada oo Xalay degmada Yaaqshiid ku qab qabtay rag dhacayay...
Masar oo go’aamisay in haweeneydu ay xaq u leedahay inay...